Golaha wasiiradda Soomaaliya oo maanta shir ka yeeshay Amniga iyo Qaxootiga Yemen – Radio Daljir
Maajo 27, 2015 9:40 b 0
Arbaco, May 27, 2015 (Daljir) —Shirkii Golaha WasiiradaSoomaaliya ayaa maanta isugu yimid shirkoodii caadiga ahaa, waxana shir gudoominayey Ra’iisul Wasaare ku xigeenka mudane Maxamed Cumar Carte Qaalib, shirka ayaa waxaa looga hadlay Amniga, arrimaha qaxootiga iyo ansixinta Hindise Sharciyeedka ka hortaga been xalaasashada sharci darada ah.
\_”Madaxweynuhu wuxuu kulamo la qaatay ciidanka iyo saraakiisha hogaamisa ciidamadaas, wuxuuna balan qaaday in ciidankii ka dagaalamay Awdheegle la siinayo abaal marin, ciidamada kale ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalkana dowladu markasta ayey u taagan tahay iney daboosho baahiyahooda qalab iyo nololeed.” ayuu yiri Wasiir Diini. Isagoo dhanka kale xusay in kooxaha nabad diidku ay weerar ku soo qaadeen Ceel Cade oo ka tirsan gobolka Hiiraan, halkaasna looga laayey rag faro badan, waxaana dagaalkaas horumuud ka ahaa dadka deegaanka oo kaashanaya ciidanka milateriga.
Sidoo kale Golaha aya looga dooday hindise sharciyeedka ka hortaga been xalaalaysiga lacagaha sharci darada, sharcigaan ayaa ujeedkiisu yahay ka hortaga danbiyad ka dhashay lacagaha la xalaalaysto, iyo lacaga ay isu gudbiyaan dambiilayaasha, waxaana lacagahaas ka yimaadaan dalal shisheeye iyadoo aan la soo marsiin hay\_’adaha maaliyadeed ee dalka. Dood dheer ka dib golaha ayaa soo jeediyey in lagu sameeyo sharcigaan dib u eegis, waxaana iska kaashanaya Garyaqaanka Guud ee Qaranka, Lataliyaha Arrimaha Sharciga Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha iyo Khubaro ka socota Wasaaradda Maaliyadda.